Ahoana no mamorona Crypto Exchange - Blockchain News
Izahay manolotra ny tsara tafa sy dinika tamin'ny mpanorina sy Tale Jeneralin'ny ny Crypto Exchange btc-alpha.com Vitali Bodnar, ny fomba mamorona Crypto Exchange avy rangotra, ratra kely.
Inona no fantatrao momba ny Cryptocurrency?
Ny specialization in fampianarana – Fizìka, informatika, computer teknolojia, Foana aho anjara amin'ny fampandrosoana. Toa tsy nahy aho namaky teo amin'ny sehatra momba ny bitcoin ary nanomboka hahatakatra ny andro, vakio ny zava-drehetra mikasika ny fomba fiasan'izy.
Ahoana no hiondrana an-Crypto orinasa?
Izany dia nanomboka tamin'ny ny zava-misy aho fa nanontany tena ny fomba ny harena ankibon'ny tany dia mitranga. Rehefa avy mahafantapantatra hoe ny dingana, nisy olana iray hafa – izay tokony hatao amin'ny vola madinika izay minted. Dia noraisiko ny vola ho any amin'ny fifanakalozana, izay, fa momba izay ihany, avy eo dia niasa mafy. Noho izany dia mifamadika hampandeha tsara ny varotra.
Nahoana no manapa-kevitra fa mila mamorona Crypto Exchange?
Izany dia noho ny tsy fahombiazana voalohany. I, Toy ny tsara mpivarotra, manana napetraka ny fitsipika fa tsy mandika ny: Aho, dia eritreretiko mialoha ny fotoana fivoahana avy ao amin'ny toerana, Tsy miasa aho rehefa miady saina, Miezaka ny tsy mba hamaha ny minuses, dia mora kokoa ho ahy hiandry, Tsy recoup amin 'izany andro aho ho any Miiba, Fotsiny aho hanakatona ny solosaina findainy ary tsy miasa. Ny tsy fahombiazana noho ny adin-tsaina nitranga, ary tamin'izany fotoana notapahiko ny hafa rehetra fitsipika. Dia niditra tao amin'ny ratsy fifanarahana, nakatona azy eo amin'ny ratsy, Nanapa-kevitra ny recoup. Fa ny indray andro, I nitarika 10 asa izany tranga. Very vitsivitsy an'aliny dolara, izay nahazo ny ela be.
Inona no vokatr'izany ny fananganana ny Exchange?
Nanomboka hanadihady ny zava-misy, ary takany fa afaka mahazo ny mpivarotra, na very vola. Fa ny fifanakalozan-kevitra foana mitoetra ao amin'ny loka. Tsapako fa ity no tena mahaliana rehetra sy izay te-hamorona tenako Crypto Exchange.
Andeha isika hanao 5 dingana mba mamorona anao manokana Crypto Exchange.
Ho ahy, ny zavatra voalohany dia ny “hodorany amin'ny ny vokatra.” Rehetra namako, olom-pantatro, vahiny, Nilazako izay rehetra aho Crypto Exchange-dalam-pandrosoana, ary dia nila ny ekipa, olona, vola, ary ny olona rehetra nilaza fa tsy mety miasa, fa nanana finoana adala. Izany rehetra izany dia eo ho eo amin'ny 2014-2015.
Koa satria tsara aho nalaza ho fampandrosoana tetikasa, niseho avy hatrany ny olona izay tsy nino ny cryptocurrency, tsy amin'ny Crypto Exchange, fa ahy ho toy ny developer izay afaka mamorona vokatra.
voalohany, Nahita hevitra aho fa afaka maka vonona-nanao pototry ny Cryptoexchange, mba manova kely, ary dia miasa. Toy ny sehatra ho an'ny onlineshop. Fa toy izany dia tsy nisy vokatra. Fandalinana an ilay foto-kevitra, Tsapako fa te-hanoratra ny zava-drehetra avy amin'ny rangotra, ratra kely sy hahatakatra ny zava-drehetra amin'ny an-tsipiriany.
Ny dingana faharoa?
Fikajiana ny lasitra fandraharahana manontolo. Tamin'izany andro izany no nampiasa bitcoinwisdom – iray amin'ireo loharanon-karena voalohany izay afaka mahita ny fomba nampihetsi-po ny tsena dia, ary hadihadiana ny zavatra rehetra ho iray andro, volana iray, ka jereo ny boky. Ohatra, ny takalon'ny asa natao ny andro tamin'ny 5000 BitCoins amin'ny fepetra tahan'ny fifanakalozana $ 500. Exchange Commission – 0.4%. 500 dia ampitomboina 5000 ary ny 0.4 ary mahazo tombony mety ho isan'andro.
Noho izany, ny raharaham-barotra modely ho an'ny fifanakalozana dia tena tsotra?
Eny, Mino aho fa raha misy zavatra tena manahirana, avy eo dia tsy mety, zavatra tsotra ihany no miasa.
Ny dingana fahatelo?
Fanomanana ny fepetra arahana ara-teknika. Tsy maintsy milaza fa ny asa ara-teknika voalohany dia nahary sy ny vokatra azo dia samy hafa ny zavatra ifotony, noho ny antony izay tsy azoko tena maro ny tsipiriany, misy fotoana izay toa tena zava-dehibe ho ahy dia tsy zava-dehibe mihitsy, ary ny mifanohitra. Ity dia fitsipika tantara.
Lazao amiko amin'ny an-tsipiriany, Ahoana no hahatonga ny ts? Aiza no mahazo ny vaovao?
Tamin'izany fotoana izany, I natakalony tamin'ny fifanakalozana maro ka nahita ny fomba fanafihana DDoS mitranga, nahita ny fomba fifanakalozana dia bankirompitra, nahita ireo mpampiasa rehefa tsy mivadika ny fifanakalozana, ary raha tsy, Fahagagana ary Tena Nilaina. I namolavola ny fepetram-boky avy amin'ny zavatra niainako aho, I nanao vokatra ao izay toy ny mpivarotra ho aina. Tiako asa rehetra mba ho mora azo. I nampiasa ny fandaharana mba hamoronana ny sehatra, izay no nitarihako 25 pejy ny ho avy toerana sy nanorina ny lojika. Ary, ny Cryptoexchanges ankapobeny dia mitovy.
Impiry ianao no mampiasa vonona-nanao vahaolana ara-teknika?
Te hampiasa mandray sy mandefa bitcoin blockchain.info. Tamin'izany fotoana izany, dia nanome ny API-bahoaka. Tamin'ny voalohany sehatra, dia toa ny ahy fa ampy ny hahazo ny vokatra tsara indrindra amin'ny fandaniana kely dia kely, ary avy eo mba hanatsara fotsiny sy hanatsarana zavatra tsirairay. Anefa izy ireo nandà anay, tsy nanazava ny antony. Mino aho fa izao no iray amin'ireo mahomby indrindra tsy fahombiazana izay nitranga. Nanapa-kevitra izahay vao hahalala ny fomba asa Bitcoin, ary nanoratra ny mpanjifa tanteraka avy rangotra, ratra kely, izay izao foana fanatsarana. izany no, manana ny Bitcoin Wallet.
Ny dingana fahefatra?
Izany no Team. Efa nisy ekipa mirindra tsara, izay niasa tamin'ny roa izahay tetikasa. Nefa tsapako fa tsy ampy traikefa mba hamoronana ny kalitaon'ny vokatra eo amin'ny cryptosphere. Ary noho izany, Nanapa-kevitra izahay ny mba fenoy ny fahalalantsika amin'ny asa fanampiny, ohatra, nandray anjara tamin'ny fampandrosoana ny fiarovana ny fanafihana DDoS-, asa mba hahazoana vola, sy ny sisa. Nandritra ny telo taona izahay, niasa teo amin'ny asa ara-teknika sy mirazotra – amin'ny antoko fahatelo-tetikasa mba hahatakatra ny fomba asa ny zava-drehetra. Noho izany, isika koa dia natao zatra manam-pahaizana manokana izay nanampy mba hampandrosoana ny tetikasa.
Ny dingana fahadimy?
Ny tena banal dia vola. Tany am-piandohana, Afaka manangona eo ho eo $ 300,000. Izany no taona ny ekipa ny rindrambaiko, ny kely indrindra ny vola lany, nefa tsy araka ny lalàna momba ny asa. Fa izany dia tamin ' 2013. ankehitriny, Heveriko fa, farafahakeliny ny $ 1 tapitrisa no ilaina. Nanomboka tamin'ny fifaninanana hafa tontolo iainana sy eo amin'ny toe-javatra hafa, Ary nisy ihany 5 fifanakalozana tahiry, Ary ankehitriny dia misy an-jatony ireo.
Inona no geolocation ny mpampiasa?
Izao tontolo izao, fa ankehitriny dia mandrara ny fisoratana anarana avy any Amerika noho ny olana ara-pitsarana.
Firy ny mpiara-miasa dia mandray anjara amin'ny fiarovana?
Raha misy asa maika, dia ny ekipa manontolo dia tafiditra ao anatiny, ary na inona na inona fotoana nitranga.
Misy fanomen'i noho ny fitadiavana fahalementsika? ary inona no?
Andro hafa, vola fanomen'i fa mahita ny mety hisian'ny hosoka e-mail mpitantana. Raha ny tena izy, izy ireo tsy afaka manatanteraka izany tena, fa ara-teorika dia azo atao hanararaotra izany marefo.
Ary izy ireo no tena mandoa?
An-jatony vitsivitsy, kely vola, satria izany no tsy fanakianana marefo. Manana ny lisitry ny vola noho ny mahita ireo na hafa fahalementsika.
Inona no tena barotra tsiroaroa eo amin'ny fifanakalozana?
BTC / USD, LTC / USD, BTC / Sandam-bola, Bt / Zcash.
Ahoana no ahafahako mametraka ny famantarana eo amin'ny fifanakalozana?
Manana ny fizarana ny fanampiana vola madinika, ary izany dia manondro mazava tsara hoe iza isika dia afaka manampy sy manao tsy.
Misaotra ny mahavariana fanadihadiana
Voaharoharo araka ny CryptoRadio ekipa
Next Post:Canadian crypto fifanakalozana Coinsquare manangana $ 30M
Rosia Bence hoy i:
Febroary 12, 2018 amin'ny 5:28 AM
make money on youtube views hoy i:
Febroary 12, 2018 amin'ny 2:51 PM
New Cryptocurrency Giving Away Free Coins hoy i:
March 1, 2018 amin'ny 9:58 AM